Mafirimu ekuona usati waenda kuRoma kuti uzive guta | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | tsika nemagariro, General, Italia
Kana iwe uri kuronga yako rwendo kuenda kuItari, pakati maguta ese aunogona kushanyira munyika, Roma inogona kunge iri yekumanikidza kumira munzira yako. Kana iwe uchida kutsvaga mafirimu ekuona usati waenda kuRoma, chinhu chekutanga chatinofanira kukunongedzera kwauri ndechekuti iyo Guta Risingagumi yakave nekutora chikamu chakakura munyika ye cinema. Uye izvi mumatepi zvakaiswa zvese mumavambo uye mukugadziriswa kwayo kwazvino.
Nezve izvo zvekutanga, patove neiri rese firimu genre iyo inodzokorodza zvekare Roma: iyo peplum. Uye, kana iri yechipiri, kubva ku Italian neorealism kune indasitiri ye Hollywood vasarudza guta guru re Italia sekugadzwa kwemazhinji emafirimu ake. Asi, pasina kumwe kunonoka, tiri kuzokuratidza mamwe emamuvhi ekuona usati waenda kuRoma.
1 Mafirimu ekuona usati waenda kuRoma: kubva peplum kusvika nhasi cinema
1.2 'Mahoridhe muRoma'
1.3 'La dolce vita', imwe zvekare pakati pemamuvhi kuti vaone vasati vaenda kuRoma
1.4 'Anodiwa Diary'
1.5 'Roma, rakavhurika guta'
1.6 'Rimwe zuva'
1.7 'KuRoma nerudo'
1.8 'Runako rukuru'
1.9 'Accatone', mufananidzo wemasabhabha
Mafirimu ekuona usati waenda kuRoma: kubva peplum kusvika nhasi cinema
Sezvatakakuudza, mafirimu aunofanira kuona usati waenda kuRoma anotora guta sechigadziro. Asi, mukuwedzera, vazhinji vavo vanozviita mumwezve hunhu izvo zvinokanganisa uye zvinototarisa hupenyu hwevapambi. Tiri kuenda kunoona mamwe emamovie aya.
Chikwangwani che 'Ben-Hur'
Dai isu tanga tichitaura nezve cinematographic genre yepeplum, iyi Hollywood blockbuster ndeimwe yemhando dzayo dzakanakisa. Inotungamirwa na William wyler uye nyeredzi Charlton heston, Stephen boyd, Jack hawkins y Haya Harareet, inoenderana neanozivikanwa mazita na Lewis wallace.
Iyi firimu inotanga muJudhiya yegore makumi matatu emakore edu. Mutungamiriri Judá Ben-Hur anopomerwa mhosva yekupokana nevaRoma uye akatongerwa zvikepe. Mushure mekusangana naJesu Kristu uye nekufamba nematanho mazhinji, protagonist anosvika muRoma akashandurwa kuita mupfumi uye mukwikwidzi mumijaho yengoro. Asi anongova nechinangwa chimwe chete: kutsiva shamwari yake yekare Mesala, ane mhosva yekusungwa kwaamai vake nehanzvadzi.
'Ben-Hur' aive nebhajeti yemamirioni gumi nemashanu emadhora, muhombe kune bhaisikopo kusvika ipapo. Vashandi vanopfuura mazana maviri vakashanda pakuvakwa kwezvishongedzo zvayo, zvaisanganisira mazana ezvifananidzo nefriji. Saizvozvowo, zana vevasonstress ndivo vaitarisira kugadzira zvipfeko. Y mamiriro emakwikwi engoro Iyo ndeimwe yeakakurumbira munhoroondo ye cinema.
Iyi firimu yakaburitswa muNew York munaNovember 18, 1959 uye ikave yechipiri yepamusoro-soro firimu kusvika ikozvino mushure me 'Kuenda Nemhepo'. Senge kuti izvo zvaive zvisina kukwana, iye akawana gumi nerimwe maOscar, inosanganisira Akanakisa Mufananidzo, Akanyanya Director, uye Akanyanya Actor. Chero zvazvingaitika, ichiri kutaridzirwa semumwe wemafirimu akanakisa munhoroondo ye cinema.
Plaza de España, uko kwakafoterwa imwe yezviitiko zvine mukurumbira zve'Roman Holiday '
Imwe firimu inotungamirwa na William wylerKunyangwe iine dingindira rakasiyana kwazvo, iri zvakare imwe yemamuvhi ekuona usati waenda kuRoma. Mune ino kesi, irudo rwekuseka ine nyeredzi Audrey Hepburn y Gregory peck. Yokutanga ndeye Anna, mambokadzi uyo, mushure mokupukunyuka kubva kune vaaipinda navo, anoshandisa zuva nehusiku muguta senge chero muRoma.
Yakapfurwa mune akakurumbira Cinecittá studio, padyo padyo neguta reItaly pacharo. Akasarudzwa kweanomwe maAcademy Awards, akahwina matatu anosanganisira Best Actress yeasingakanganwike Audrey. Saizvozvowo, zviitiko zvakaita seiya ine vese protagonists pamatanho eiyo Spain Chikamu kana iyo yekushanya mudhudhudhu yakaenda pasi muzvinyorwa zvema cinema.
'La dolce vita', imwe zvekare pakati pemamuvhi kuti vaone vasati vaenda kuRoma
Chiitiko chakakurumbira kubva ku'La dolce vita '
Yakanyorwa uye inotungamirwa na Federico Fellini mu1960, zvakave zvichiroverwa pamwe chete seimwe yemhando dzekare munhoroondo yemufirimu. Yakatanga kuCannes Film Festival gore iro uye yakapihwa iyo Ndarama yegoridhe, kunyangwe aive nerombo shoma kuma Oscars nekuti akangowana iyo chete neakanakisa dhizaini dhizaini.
Ma protagonists ayo ari Marcelo mastroianni, Anita ekberg y Anouk Aimée. Iyo rongero inotaurira dzinoverengeka dzakazvimiririra nyaya dzine zvakajairika kubatana iguta reRome pachayo nenzvimbo dzayo. Zvakare mune ino kesi iwe unozoona chiitiko chisingakanganwiki: icho chevaviri protagonists vanogeza mune Trevi Tsime.
Nanni Moretti, director we 'Anodiwa pepanhau'
Autobiographical firimu umo director wayo uye protagonist, Nani moretti, inotaura nezvezviitiko zvake muGuta Risingagumi. Inoumbwa nezvikamu zvitatu zvakazvimiririra uye inosanganisa komedi ine zvinyorwa. Yakaburitswa muna 1993 uye, gore rakatevera racho, yakawana iyo Ndarama yegoridhe kuCannes uyezve mubairo weakanakisa director.
Anonyatso kuzivikanwa ndee zviitiko umo protagonist anofamba achipfuura nemuguta kumashure kweVespa yake achitsanangura zvikonzero nei achifarira nharaunda senge Flaminio zambuko o Garbatella. Kana iwe uchida kuwana ruzivo nezve zvisingazivikanwe uye epakati nzvimbo dzeRome, tinokukurudzira kuti utarise iyi bhaisikopo.
'Roma, rakavhurika guta'
Chiitiko kubva ku'Roma, iro rakavhurika guta '
Zvishoma zvishoma mhando toni ine iyi firimu ye Roberto Rosellini yakatanga muna 1945. Yakagara muHondo Yenyika Yechipiri, inotaurira nyaya dzinoverengeka dzine protagonists dzakabatana nekushora kunopesana neNazi.
Zvisinei, mumwe wevanhu vanokosha ndiye mupristi baba Pietro, uyo anopedzisira apfurwa nemaGerman uye chiri chinyorwa che Luigi morosini, mumwe mufundisi akabatsira kuramba uye akatambudzwa uye kuurayirwa izvozvo.
Saizvozvo, basa re Chinanazi, mukadzi akatambiswa Ana Magnani. Pamwe chete neizvi, vatambi ndiAldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Nando Bruno, Harry Feist naGiovanna Galletti. Iyo tepi isina kuchena zvekuti yaitove nenyaya nekutarisa. Mukudzoka, yakawana iyo Ndarama yegoridhe paCannes Film Festival.
Marcelo Mastroianni, nyeredzi ye 'Rimwe zuva' naSofía Loren
Marcello mastroianni y Sophia Loren Vakashanda pamwechete pamafirimu akati wandei, asi iyi ndeimwe yeakanakisa. Iyo yakagadzwa mumaXNUMXs, apo fascism yaive ichizara zvizere, uye ichiumba mufananidzo wakakomba wenzanga yeItaly panguva iyoyo.
Mastroianni anoridza radio radio akadzingwa nekuda kwekuti ngochani uye Loren anotamba mukadzi akaroorwa nemukuru wehurumende. Ivo vaviri vanopinda muhukama pavanosangana netsaona nekuti hapana kana mumwe wavo akambopinda muparati mukuremekedza Hitler musi waMay 1938, XNUMX.
Mutungamiriri weiyo firimu aive Ettore scola, uyo akashandawo pane zvakanyorwa. Sekuda kuziva, anotamba chinzvimbo chinotsigira mufirimu Alessandra mussolini, muzukuru wemudzvanyiriri wechiFascist. Yakapihwa kwazvo, yakaunganidza mazita maviri eOscar: akanakisa mutambi uye akanakisa mutauro mutauro wekunze, kunyangwe hazvo haina kukunda.
Roberto Benigni, mumwe wevanyori ve 'A Roma con amor'
Chazvino firimu iri rinotungamirwa na Woody Allen. Mumwe wevanyori, mugadziri wemimhanzi anonzi Jerry, anoridzwa naAllen iye.
Vamwe vacho ndiJack, mudzidzi wezvekuvaka akaridzwa na Jesse Eisenberg; Leopoldo, murume asingazivikanwe anongoerekana ava midhiya anotarisa uye anoita Roberto Benigni, naAntonio, basa raanotamba Alessandro tiberi. Pamwe chete navo, Penelope Cruz, Fabio Armilato, Antonio Albanese naOnella Muti vanoonekwa.
Toni Servillo, nyeredzi ye'Runako rukuru '
Yazvino neye yapfuura, sekuburitswa kwayo muna2013, iyi firimu inotungamirwa na Paolo Sorrentino, uyo akanyorawo script padivi Umberto Contarello. Uye zvakare ine poindi yehunhu.
MuRoma yakaparadzwa ne ferragosto, mutori wenhau akashushikana uye munyori Jep Gambardella Izvo zvine chekuita neakasiyana mamiriri mavara kubva kumatunhu epamusoro nharaunda. Vakuru vezvematongerwo enyika, vezvematongerwo enyika, machena machena makara, vatambi nevamwe vanhu vanoumba chirongwa ichi chinoitika mudzimba dzeumambo uye dzimba dzakanaka.
Nyeredzi dzemamuvhi Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina ferilli, Galatea ranzi y Carlo Buccirosso, pakati pevamwe vaturikiri. Muna 2013 akapihwa iyo Ndarama yegoridhe Cannes uye, nguva pfupi yapfuura, ne Oscar yeiyo yakanakisa mutauro mutauro wekunze. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti ichi chiitiko chechirongwa che 'La dolce vita', icho chatakakuudza nezvazvo.
'Accatone', mufananidzo wemasabhabha
Pier Paolo Pasolini, director we 'Accatone'
Mune ino runyorwa rwemafirimu ekuona usati waenda kuRome haigone kupotsa imwe inotungamirwa na Pier paolo pasolini, mumwe wevanyanzvi ainyatsoziva kutora kukosha kweGuta risingagumi, ichokwadi kuti akasvinudzwa nemaonero ake akasarudzika.
Tinogona kukuudza nezvematepi akati wandei, asi isu tasarudza iyi nekuti iwo mufananidzo wemuRoma wepakati. Accatone ipimp kubva kumasabhabha asingaregi kufa nenzara, seboka revamwe vake. Anokwanisa kuita chero chinhu pamberi pebasa, anoramba achitaurira uye nekuwana vakadzi vatsva vekushandisa.
Sezvauri kuona kubva pachirevo, iwo mufananidzo une hutsinye wepasi peRoma yemakumi mashanu ezana ramakore rapfuura. Inwa kubva Italian neorealism uye inodudzirwa na Franco Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut y Paola Guidi pakati pevamwe vaturikiri. Sekuda kuziva, isu tinokuudza izvozvo Bernardo Bertolucci akashanda semubatsiri director pane iyo firimu.
Mukupedzisa, takuratidza imwe ye mafirimu ekuona usati waenda kuRoma. Ivo chikamu chinomiririra chevaya vese vane iro risingaperi Guta sedanho kana kunyangwe seimwezve protagonist. Muchokwadi, tinogona kutaura vamwe vakaita 'Ngirozi Nemadhimoni'naGregory Wedzera; 'Husiku hwaKabiria'naFederico Fellini; 'Beautifull'naLuchino Visconti kana 'Idya Namata Rudo'rakanyorwa naRyan Murphy.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » 9 mafirimu ekuona usati waenda kuRoma